eme ka a collaborative playlist na Spotify t
Iji mee ka a Spotify collaborative Playlist? Ọ dị mfe
Na Spotify, ịnweta na-ekere òkè a humongous ndepụta nke tracks ma ọ bụ songs site iche iche artists, listi ọkpụkpọ, albums, genre ma ọ bụ ndekọ labeelu bụ nnọọ mfe. Anyị kpuchie ọtụtụ n'ime ndị a isiokwu na n'oge gara aga Otú ọ dị taa na anyị chọrọ atụle ihe dị ịtụnanya atụmatụ na nnọọ obere na-ekwu banyere. N'ezie, ọ bụghị ọtụtụ n'ime Spotify ọrụ maara banyere nke a magburu onwe na ihe nhọrọ na ha nwere on Spotify. Ọ bụrụ na n'ụzọ ziri ezi na-eji, nke a mma ike welie ha na onye ọrụ ahụmahụ na Spotify a ọhụrụ larịị kpam kpam.
Ị na-ahụ, ruo ugbu a Spotify kemgbe kwa jụụ ime ka ị ịmepụta listi ọkpụkpọ na mgbe ahụ na-eso ha na ndị enyi gị ma na nke a ọhụrụ mma ha gafere ọtụtụ ndị ọzọ kilomita site n'inye gị nhọrọ nke inwe ike na-arụ ọrụ ọnụ na a na-akọrọ playlist, tinyere ndị enyi gị na onye ọ bụla ọzọ. Nke ahụ dị mma; ị nwere ike ugbu imepụta egwu ọkpụkpọ on Spotify na ị nwere ike ijikwa ọnụ na ndị enyi gị na ndị ọzọ. Ọ bụghị na dị nnọọ ịrịba!
Ọ na-akpọ a 'collaborative Playlist' na ọ bụ nnọọ mfe ike otu. Anyị ga-eme ka ị mara niile nzọụkwụ aka na-a 'collaborative Playlist' nke gị onwe gị na mgbe ahụ nwere enyi gị jikwaa ya nakwa tinyere gị.
1. Olee otú ime ka a Spotify collaborative playlist on PC
2. Olee otú ime ka a Spotify collaborative playlist na android ekwentị
3. Download music si Spotify
Ebe a na-na nzọụkwụ nke-esi mee ka a Spotify collaborative playlist on PC.
Nzọụkwụ 1: Creation nke playlist - Ị nwere ike ma ike ọhụrụ playlist site ọkọ ma ọ bụ ọrụ na-ẹdude otu.
Nzọụkwụ 2: Kpebie ma ọ bụ kere playlist, nri pịa ya na mgbe si dobe ala menu, dị họrọ nhọrọ nke 'collaborative Playlist'. Ị ga-ahụ na ozugbo i mere ihe a, ndị nnọchiteanya nke Music Cheta nri na-esote na Playlist ga-atụgharị si White ka Green na na a ego akara apụtawo ìhè n'ihu na-esote ya nakwa.
Step3: Ugbu a, gịnị na-ekpe ka a mere bụ ịkọrọ ndị playlist na ị dị nnọọ ghọọ a 'collaborative Playlist, na ndị enyi gị, nke mere na ha onwe ha kwa na-enwe ike jikwaa playlist, na-agbakwunye ma ọ bụ na-eme mgbanwe ndị tracks na nke a playlist.
Iji mee nke a, nanị nri pịa collaborative Playlist na site na dobe ala menu, họrọ nhọrọ nke 'Share'.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, dị ka ogologo oge na i sowo n'elu nyere nzọụkwụ n'ụzọ ziri ezi na emewo ihe nile dị n'otu ụzọ ahụ dị ka nzọụkwụ gwara gị ka i, ndị enyi gị kwesịrị inwe site ugbu a natara ozi na a njikọ nke playlist na ị na-akọrọ ha. Na-enwe ike jikwaa playlist, ha ga-ọ bụghị nanị na pịa na njikọ kamakwa eso playlist site na ịpị nhọrọ 'Soro'.
Ya mere, n'ebe ahụ ka ị na-aga. Iji akụkụ a nke bụghị nanị na-ekerịta playlist kamakwa-eme ka ọ collaborative n'etiti ndị enyi gị, na-ege na-akọrọ music emewo a ọhụrụ n'aka na ọ na-emekwa-aghọ ndị ọzọ fun.
I nwere ike ime otu ihe ahụ site na iji Spotify ngwa gị Android ekwentị?
Ee bụ azịza. Nzọụkwụ ezie bụ ubé dị iche iche karịa ndị nyere n'elu mgbe iji Spotify ngwa. Ebe a bụ otú ị na-eme ya.
Nzọụkwụ 1: Mwepụta ngwa maka Spotify na gị Android ekwentị.
Nzọụkwụ 2: Site isi menu on Spotify n'ụlọ, họrọ nhọrọ nke 'Your Music' wee pịa na 'Ndetuta egwu ọkpụkpọ' nhọrọ ma ọ bụ taabụ.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, pịgharịa ala ndepụta na-emepe na họrọ onye playlist ị ga-achọ ndị ọzọ na-enwe ike jikwaa na gị. Cheta na playlist ị họrọ ekwesịghị ịbụ onye ị na-eso onwe gị. Ọ pụtara na ị pụrụ nanị iji ọhụrụ ma ọ bụ ihe ugbua kere na ẹdude playlist na na kwa naanị ma ọ bụrụ na e kere site gị.
Nzọụkwụ 4: Ozugbo i na-ahọrọ playlist, kpatụ ma ọ bụ pịa na menu button nyere n'elu nri n'akụkụ aka nke ihuenyo.
Nzọụkwụ 5: Site dobe ala menu na ị ga-esi, họrọ nhọrọ nke 'Mee collaborative' na n'ebe ahụ ka ị na-aga. I nwere ugbu a converted ahụ playlist na a collaborative onye na niile ndị enyi gị nwere ike idezi dị ka mma.
Nzọụkwụ 6: Otu ihe ikpeazụ ga-eme bụ ikere òkè na playlist mere na enyi gị nwere ike ịnweta ya. N'ihi na nke a, na-aga otu menu button na ị dị nnọọ pịrị na họrọ nhọrọ nke 'Share'. Nke a ga-zipụ njikọ ka ndị enyi gị na ozugbo ha pịa on, ha ga-enwe ike dezie a playlist tinyere na-ege ntị ka ọ na-anụ ụtọ ya.
> Resource> Spotify> Iji Mee a Spotify collaborative Playlist? Ọ dị mfe